चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! – Online Nepal
June 8, 2020 232
एजेन्सी–यतिखेर विश्वका कैयौं मुलुक कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन तयार पार्ने दौडमा छन्। यही दौडका क्रममा अमेरिका र चीनबीच ‘अघोषित युद्ध’ जस्तै छ। अमेरिकी अधिकारीहरु चीनले पहिला भ्याक्सिन तयार गरेमा यसको प्रयोग आर्थिक र कूटनीतिक सफलता हासिल गर्न सक्ने भन्दै डराइरहेका छन्।
विश्वका केही देशहरु भने एक-अर्काबीच सूचना साटासाट गर्दै भ्याक्सिनको तयारीमा काम गरिरहेका छन्। तर चीन र अमेरिका आ–आफ्नै हिसाबले भ्याक्सिन निर्माणको तयारीमा प्रयासरत छन्। रातदिन खटिइरहेका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका एक अधिकारीले कोरोनाको भ्याक्सिन तयार गर्ने मुलुकले विश्वमा शासन गर्ने बताए।
वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स र बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्टले तयार गर्दै गरेको कोरोना विरुरद्धको भ्याक्सिन उपयोगी हुने ठूलो सम्भावना रहेको छ । यो अर्थमा हेर्दा सफल भए जुन मुलुकबाट कोरोना फैलियो त्यही मुलुकले विश्वलाई भ्याक्सीन उपलब्ध गराउने देखिन्छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको भ्यक्सिन अब सबैभन्दा पहिले विश्वलाई चीनले नै वितरण गर्ने भएको छ ।
चीनको एसेट्स सुपरविजन एण्ड एडनिनिस्ट्रेशन कमिशनले यस्तो सम्भावना व्यक्त गरेको हो । उक्त कमिशनले शनिबार एक सोसल मिडिया पोस्टमा चीनमा बनेको कोरोनाभाइरसको भ्याक्सिन यस वर्षको अन्त्यसम्म वितरणका लागि बजार आउन सक्ने बताएको छ ।
चीनले भ्याक्सिनको तयारी सुरुवाती दिनमै गरेको हुनसक्छ। अहिले चीनमाथि वुहानवाट भाइरस फैलाएको आरोप विश्वभरबाट लाग्दै आएको छ। यस्तोमा उसले भ्याक्सिन पहिला तयार गरेमा पुरानो छवि मेटाएर नयाँ बनाउन सक्ने अवसर हुने पनि देखिन्छ।
चीनले अहिले दोस्रो चरणमा रहेको भ्याक्सीन सफल भए यही वर्षको डिसेम्बर सम्ममा चीनले बजारमा ल्याउने र विश्वलाई वितरण गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ । पहिले यो भ्याक्सीन दुई हजार व्यक्तिमाथि ट्रायल गरिएकोमासफल भएको थियो । र अहिले यो भ्याक्सीन दोस्रो ट्रायलमा छ । यसअघि मार्च २९ मा चिनियाँ सोसल मिडिया प्लेटफर्म विच्याटमा जानकारी दिइएको थियो ।
Prevआइतबार रातिको भीषण वर्षाले काठमाडौंका बस्ती डुबानमा
Nextएक्कासी किन हास्यो कहिलै नहास्ने कालभैरवको मूर्ति ? के हुन्छ अब ?
को हो सुहानाको राजकुमार ? (भिडियो हेर्नुहोस)